हामीले भिडिओ हेर्दा युट्युबले कसरी कमाउँछ पैसा ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/हामीले भिडिओ हेर्दा युट्युबले कसरी कमाउँछ पैसा ?
काठमाडौं । हामीले हेरेका भिडिओबाट युट्युबले कसरी पैसा कमाउँछ भन्ने प्रश्न सबैको मनमा आएको हुनसक्छ । हामीले मोनिटाइजेसनका सबै प्रक्रिया सक्यौं भने युट्युबले हाम्रा भिडिओमा विज्ञापन चलाएवापत भुक्तानी दिनेगर्छ ।